Nonstick tena toetrany Teflon Fabric ho an'ny faritra Natonta Board fanamboarana - China Jiangsu KingRay Composite
Teflon Fabric, vita amin'ny fitaratra teflon mifono lamba amin'ny sakan'ny 0.15mm, toy ny fanafahana amin'ny fanamboarana taratasy vita pirinty faritra ny zana-kazo
Inona no PTFE Glass Lamba?
Teflon lamba na ny fanaka avo lenta Fiberglass, ary impregnated avo-fampisehoana PTFE ranon-javatra ara-nofo, amin'ity tranga ity, izany PTFE Fiberglass mifono lamba dia manana ny tombony azo amin'ny hafanana avo ambonin'ny manohitra sy nonstick.
Famaritana ny Telfon mifono lamba
Max Sakany (MG)
Tensile Hery (N / 5cm)
Manararaotra PTFE Fabric?
Hafanana avo manohitra, tsara nandritra ny famoahana fananana diplaoma -70-360C
Non ambonin'ny hazo, na inona na inona Manaraka ambonin'ny dia mora ny manadio
Simika harafesiny fanoherana
Amin'ny lafiny miovaova sy ambany friction
Microwave sy ny UV fanoherana
FDA nad LFGB fankatoavana, dia azo ampiasaina toy ny fatana Liner, BBQ tsihy
Ahoana ny fampiasana teflon taratasy?
Toy ny taratasy fanafahana amin'ny fanamboarana ny faritra malefaka vita pirinty biraom-(FPC), Recommend 0.15mm
Rlease horonantsary for EVA ny sela amin'ny herin'ny masoandro orinasa, Recommend 0.25mm sy 0.35mm
Natao ho fusing ampiasaina amin'ny milina fehikibo kitapo famehezana, Recommend 0.13mm
Conveyor fehikibo eo amin'ny dingan'ny ny napkin fonosana taratasy, Recommend 0.25mm
Araka ny lafaoro Liner, mofo Liner ny fanaova-mofo, Recommend 0.11mm, 0.13mm, 0.20mm
Natao ho teflon ondana ho an'ny akanjo fanontam-pirinty, Recommend 0.11mm
Nahoana ny Non-tapa-kazo & Heat mahatohitra PTFE Lamba ambony noho ato amin'ity tsena?
Ankehitriny dia manana 13 coating milina, ary ny 24 ora nihazakazaka, izay mahatonga ny vidiny ara-nofo nampihena be dia be.
Ary manenona sasany karazana fiberglass mafy ny tenantsika, sy ny tsara indrindra alemà fanenomana Machine DORNIER, hividy ny sasany avo-fampisehoana fitaratra fibre avy any Taiwan sy CPIC.
Ny PTFE mampiasa zavatra isika dia 100%-dehibe Dupont & Dakin PTFE.
Ary ankehitriny isika dia mivarotra ny firenena mihoatra ny 100 miaraka amin'ny PTFE lamba.
Manana Full Karazana PTFE mifono Fabric, miaraka amin'ny fifaninanana vidiny sy ny kalitao avo vokatra.
PTFE Lamba , hateviny manomboka amin'ny 0.06mm ny 1mm, afaka hanao izany ho Anti-voasakantsakan'ny, Porous, Smooth, Maozatra , ary hanao izany ho Dark Brown, Light Brown, White, ny mainty sy ny loko colorized.
PTFE Tape , hatevin'ny manomboka amin'ny 0.08mm ny 0.30mm, ny tsara indrindra Dow-Corning Silicone Adhesive.
PTFE Belt , tahaka ny harato Open fehin, PTFE Lamba fehin, Tsisy Fiafarana fehin, fehikibo amin'ny Joint sns
PTFE Mats & Liner ho an'ny sakafo , toy ny BBQ Mat, fatana Liner sy ny sisa.
Previous: PTFE fiberglass mifono lamba ho Leather laminating milina
Manaraka: Tsara Release Property Non Hazokely PTFE mifono damba